တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	ဘာမှအလုပ်မဖြစ်ဘဲထွက်ခွာရတဲ့ဂမ်ဘာရီ	August 23, 2008
ဒေါ်စုကြည်အနေနဲ.ဂမ်ဘာရီနဲ.ဘာကြောင့်မတွေ.သလဲဆိုတာကျနော်တို.မသိဘူး၊ကျနော်တို.ကြားသလောက်တော့၊သူမအနေနဲ. လက်ရှိဂမ်ဘာရီရောက်လာသည်.အခြေအနေနဲ.ကျေနပ်မှုမရှိဘူး လို.ပြောပါတယ်၊“We just don’t know why,” Nyan Win said of the NLD leader who has been under house arrest for most of the past five years.
ဂမ်ဘာရီထွက်ခွာလျှင်ထွက်ခွာချင် စောက်ရူးဥာဏ်ဝင်းက ဒီလိုပြောပါသည်၊ဒီတစ်ခေါက်ခရီးစဉ်ဟာ ဘာမှအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုမရှိဘူး၊ အရင်အခေါက်ခရီးစဉ်နဲ.ဘာမှသိပ်ထူးထူးခြားခြားမရှိဘူး၊After Gambari’s departure, Nyan Win told Reuters this latest mission was “unproductive. Not much different from his last visit.”
Sat Aug 23, 2008 7:28am EDTBy Aung Hla Tun